Author Topic: Rekha Thapa (रेखा थापा) Nepali Actress (Read 271709 times)
« Reply #180 on: April 10, 2015, 09:44:56 AM »
Rekha's Rampyari to feature her nephew
went to worship Dakshinkali temple
« Reply #181 on: April 12, 2015, 09:30:26 PM »
rekha thapa shorts.jpg (121.21 kB, 552x960 - viewed 465 times.)
rekha thapa shorts 2.jpg (207.82 kB, 639x1758 - viewed 473 times.)
« Reply #182 on: April 14, 2015, 11:11:04 PM »
rekha thapa bellly button.jpg (105.05 kB, 960x720 - viewed 469 times.)
sudarshan and rekha .jpg (37.51 kB, 416x662 - viewed 457 times.)
« Reply #183 on: April 20, 2015, 09:43:51 AM »
रेखासंग बर्षदिन कतिवेला वित्यो पत्तै भएन
सोमबार, चैत्र ३०, २०७१
नयाँ नयाँ काम गरेर विश्वको ध्यान तान्न सफल सुदर्शन गौतमसँग पछिल्ला गतिविधि, जीवनका उतारचढावपूर्ण अवस्था र रेखा थापासँगको सम्बन्ध लगायतका विषयमा नेपालपाटी डट कमले गरेको कुराकानीः
पछिल्लो समय कसरी बितिरहेका छन ?
२०७२ मा प्रदर्शनमा आउने मेरो चलचित्र ‘सुपर हिरो’ को लागि डान्स, फाइट, हेलिकोप्टर जम्पिङ लगायतका अरु क्लासहरु अमेरिकामा लिदैछु । नेपाली संस्कृतिलाई विश्वसामू पु¥याउने उद्देश्यले सार्कका ८ देशको संयुक्त फेशन र संस्कृतिका सो न्युयोर्क र क्यानडाको टोरोन्टोमा आयोजना गराउँदैछु । जुन कार्यक्रम अमेरिकाका राष्ट्रपतिले न्युयोर्कमा र क्यानडाका प्रधानमन्त्रीले टोरोन्टोमा समुदघाटन गर्दैहुनुहुन्छ । सार्कका अध्यक्षको हैसियतले नेपालका प्रधानमन्त्री, अरु मन्त्रीहरु, कलाकार, मोडल, समाजसेवाी, पत्रकाहरुको जमघट हुनेछ भने त्यो कार्यक्रममा विशेष आकर्षको रुपमा नेपालका ५देखि १० जना राउटे र कुसुण्डा जातिहरुको पनि सहभागिता गराइने छ ।
अमेरिका , क्यानडामा पनि आदिवादसी जातीहरु भएकाले यो कार्यक्रम एउटा ऐतिहासिक हुनेछ । अमेरिका, क्यानडा र नेपालबीचको साम्प्रदायिक सम्बन्ध पनि सुदृढ हुने आशा लिएको छु । जुन कार्यक्रम अमेरिकामा रहेका सार्क राजदूतावास तथा थुप्रै कम्पनी तथा संस्थाहरुको सहयोगमा आयोजना हुँदैछ ।
eet on the world foundation North America स्थापनाको साथै निकट भविश्यमा नै नेपालको राजधानीमा अपाङ्गता तथा वृद्धवृद्धाहरुले सहजै प्रयोग गर्न सक्ने सुलभ शौचालयहरुको निर्माण र अपाङगता र वृद्धवृद्धाहरुलाई लक्षित नेपालमा नै पहिलो पटक सुलभ मेट्रो बसको पनि सुरुवात हुँदैछ । यो प्रोजेक्टको लागि क्यानडाको अल्बर्टा सरकारको तर्फबाट सहयोग प्राप्त भै सकेको छ।
दुवै हात कहिले गुमाउनुभयो ? त्यो बेला कस्तो अनुभव भयो ?
विद्युतीय दुर्घटनाबाट आजभन्दा १८ वर्ष अघि बानेश्वर थापागाऊँमा हात गुमाएँ । जुन बेला म १२ वर्षको थिएँ । कक्षा ९ मा पढ्थेँ । सोच्नुहोस त, त्यो खेल्ने, रमाइलो गर्ने समयमा एक्कासी दुवै हात काटेर हस्पिटलको बेडमा सुतिरहँदा म के सोच्थे होला ? भविश्यको बारेमा कस्तो परिकल्पना गर्थे होला ? समाज, परिवार र शिक्षाको बारेमा, जीवन के हो, कसरी बित्छ, बिताउँछु सोच्न सकेको थिइन । तर म यति ठूलो दुर्घटनाबाट बच्न सफल भएँ । मलाई लाग्थ्यो ‘म त्यसै बचेको छैन, यो दुनियाँलाई मेरो खाँचो छ । मैले केही नयाँ कुरा गर्नुपर्छ । दुनियाँमा नयाँ पहिचान बनाउनुपर्छ ।’ मेरो मनले अपाङगतालाई सहजै जित्यो । मलाई हात नभएकोमा दुःख लागेन । बरु हात विना नै के के गर्न सक्छु, त्यसको खोजीमा रहेर हस्पिटलको बेडबाट खुट्टाले लेख्ने, खाने, नुहाउने, के गर्न सक्छु तेस्को खोजिमा रहे र हस्पिटलकोको बेड बाटनै खुट्टाले लेख्ने , खाने , नुहाउने, शौचालय जाने जस्ता अत्यावश्यक कुराहरु आफैँ गर्न थालेँ । त्यसैले आज खुःशी लाग्छ हात गुमाएकोमा ।
तपाईले अचम्मको कुरा भन्नु भयो । दुवै हात गुमाउँदा पनि कोही खुशी हुन सक्छ ?
प्रेम जी , ठिक भन्नु भयो । सायद, आजको दिनसम्म म नेपालमा नै थिए भने त्यो दुःख मलाई महसुस हुन्थ्यो होला । र मेरो जीवन असहज लाग्थ्यो होला । आज म क्यानडाको नागरिक हुँ । म यस्तो समाजमा बस्छु, जहाँ शरीको अंग गुमेको मानिसलाई अपाङ्ग भनिदैन । त्यस्तो व्यक्तिलाई अपाङग मानिन्छ, जसले काम गर्दैन । आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्दैन । परिवार र समाजप्रति उत्तरदायी छैन । त्यस्ता व्यक्तिलाई धेरै ठूलो अपाङग मानिन्छ । र सरकारले बेरोजगार भत्ता दिन्छ । म त बिजनेश गर्ने र हात भएकाहरुलाई रोजगार दिएर बसेको र बस्न सक्ने मान्छे । आज म जुन पोजिसन र उचाइमा छु । त्यो सायद धेरै कम मानिसको जीवनमा प्राप्त छ । आज म संसारको एक्लो मानिस हुँ । जसले विना हात सगरमाथाको सफल अरोहण ग¥यो । मलाई लाग्छ, अपाङग त्यो हो, जसमा क्षमता छैन । अब मलाई भन्नुहोस, म के कुरामा दुःखु हुने ? के को लागि दुःखु हुने ? संसारका ८० देश घुमेर आफ्नो जीवन के हो र अरुको जीवन कस्तो हो सवै बुझेको छु । संसारभर डुलेर जीवनप्रति आशा मारेर बसेका निराश मानिसहरुमा म आशा जगाउने काम गर्छु । उत्प्रेरणा थप्ने काम गर्छु । मलाई हेरेर आज मानिसहरुमा आशा र भरोसा पैदा हुन्छ । यो सानो कुरा होइन । आशा र भरोशा भन्ने कुरा मानिसले मन्दिर र भगवानसँगबाट मत्र पाउँछ । दुःख, सुखको सवै अनुभव छ मसँग । जीवनको परिभाषा उसको सोचले फरक पार्छ । म सधै सकारात्मक सोच बनाउने मानिस हुँ ।
हात गुमाएदेखि कलेजसम्मको यात्रा कस्तो रह्यो ?
मैले दुवै हात गुमाउँदा कक्षा ९ मा पढ्थेँ । हस्पिटलको बेडबाट मैले आफूलाई दैनिक आवश्यक कुराहरु २ खुट्टाले गर्न सक्ने भएँ । सवैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हातले जस्तै पूर्ण रुपमा खुट्टाले लेख्न सक्ने भएको थिएँ । जसले मेरो जीवनलाई आजको यो उचाइमा पु¥याउन ठूलो भूमिका खेल्यो । हात गुमाएरपछि मैले खुट्टाले एसएलसी दिएर दोस्रो श्रेणीमा पास भएँ । त्यो दिन मलाई परिवार र गाउँलेले फूलमाला लगाएर गाऊँको इज्जत राख्नु र यो संसारमा आफ्नो नाम राख्नु भन्ने आशिर्वाद दिएका थिए । त्यो मेरो सफलताको र खुसीको पहिलो दिन थियो । काठमाडौँको बानेश्वरमा मेरो शारीरिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर घर बनाइदिनुभयो । मेरो काठमाडौँ बसाई धेरै सहज र सुविधासँग बित्यो । बुबाममीले मेरो हात छैन, कमजोर छु भन्ने कुराको महसुस मलाई आजको दिनसम्म गर्न दिनु भएन । जे गर्न सोच्थेँ, त्यो कुरा पुरा गर्नुहुन्थ्यो । खुट्टाले नै २०५४ सालमा कम्प्युटर डिप्लोमा कोर्स गरेको थिएँ । जुन कुरामा मेरो बुबाले मलाई धेरै प्रेरणा दिनु भएको थियो । कम्प्युटर र इन्टरनेट शिक्षाले मलाई दुनियाभरको ज्ञान प्रदान गर्दथ्यो । काठमाडौँमा दुवै हात नभए पनि खुट्टाले लेखेर एसएलसी पास गर्ने नेपालको पहिलो मान्छे भनेर पत्रिपत्रिकाहरुले मलाई निकै ठूलो हिम्मत दिनुभएको थियो । नेपाल कमर्स क्याम्पसमा भर्ना भए र तुरुन्तै विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय भएँ । म हरेक कुरामा सक्रिय मानिस थिएँ र छु पनि । मलाई केही न केही नयाँ गरिरहनुपर्छ । समाज र देशलाई केही नयाँ गरेर देखाउने र आफ्नै नयाँ पहिचान बनाउने सोचले नै पहिलो पटक काठमाडौँमा साधारण कार १० हजार भन्दा बढी जनताको बीचमा खुट्टाले चलाएर देखाएँ । जुन कुराले नेपाल र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहिचान बनाउन सफल भएँ । त्यो समयमा नै मुगु जिल्लामा २० हजार जनताहरुलाई लत्ता कपडा तथा ग्रामिण विकास सम्बन्धि कार्यक्रमहरु अध्यक्ष भएर सम्पन्न गरेँ ।
विना हात सगरमाथा चढ्ने र स्काई ड्राइभिङ गर्नुभयो । कहाँबाट आउँछ यस्तो प्रेरणा ?
मेरो जीवनको उद्देश्य आफ्नो नाम र कामलाई संसारमा परिचित बनाउनु थियो र छ पनि । सगरमाथा संसार भरको मानिस र मिडियाको विज्ञासाको केन्द्र विन्दु हो । त्यसैले मैले पनि सन् २०१३ मा सफलतापूर्वक विना हात आरोहण गरे र संसारभरका मानिसलाई एक पटक सोच्न बाध्य बनाइदिएँ । मानिसले चाहे, असम्भव केही पनि छैन भन्ने उदाहरण पेश गरिदिएँ । संसारका विलियन मान्छेहको भीडमा आज सुदर्शन गौतम संसारको एउटा मात्र नाम हो । त्यसैले मलाई गर्व लाग्छ । मेरो नाम दिने मेरो परिवारमाथि । स्काई ड्राइभिङ र कल फोन चलाउने, सगरमाथा चढ्ने र ट्रेकिङ गर्ने मेरा शोख हुन ।
क्यानडामा कहिले जानुभयो र के कस्तो उपलब्धि प्राप्त गर्नुभयो ?
क्यानडामा म २००६ मा परिवारको साथ गएको थिएँ । सुरुसुरुमा धेरै नै दुःख को अनुभव छ हामीहरुसँग । पहिलो कुरा मैले अल्बर्टा राज्यबाट कानुनी रुपबाट नै मोडीफाई नगरी कार चलाउन सक्ने गरी लाइसेन्स लिए । धेरै सामाजिक संस्थाहरुमा सम्लग्न भएँ । क्यानडाको राजनीतिक पार्टी Consertive सँग आवद्ध भएर पनि काम गरेँ । जसले मलाई रज्इस्तरको पहिचान बनाउन सहयोग ग¥यो ।
रेष्टुरेन्ट तथा कार वासको व्यवसाय पनि गरेँ । दुवै हात विना क्यानडाली नागरिकको हैसियतले सगरमाथा आरोहण पनि गरेँ । २०१२ मा कैलगरी हेराल्डको तर्फबाट Compelling Calgariens को अवार्ड प्राप्त गरेँ । जुन Calgary city मा must Power full र famous मान्छे मध्ये २० जनाले पाउँछन । जुन अवार्ड पाउने म सानो उमेरको पहिलो Immigrent हुँ क्यानडाको । क्यानडा सरकारले मेरो कामको कदर गर्दै गत वर्ष हल ओफ फेमको अवार्ड दिएरु उच्च समन प्रदान गर्यो । जुन अवार्ड क्यानडा सरकारको संसादबाट प्रदान गरिने उच्च सम्मान हो । त्यो सम्मान क्यानडाका अपाङग व्यक्तिरुमा पनि धेरै प्रेरणाको रुपमा लिइयो । मैले पनि धेरै ठूलो रुपमा लिएको छु ।
अन्तिम वर्षको सुपर हिट सिनेमा ‘हिम्मतवाली’ मा नायक बनेर देखिनुभयो । कसरी सम्भव भयो ?
रेखा फ्ल्मिसबाट यो अवसर प्राप्त भयो । रेखा थापाले मलाई मेरो अभिनयलाई दर्शकसामु पु¥याउने मौका दिनुभयो । मैले जति सकेँ, त्यति गरेँ । दर्शकहरुले चलचित्र हिम्मतवाली धेरै मन पराउनुभयो । मेरो अभिनयलाई पनि रुचाउनुभयो । यसबाट मैले फेरि अर्को उत्साह पाएको छु ।
रेखा थापासँग जोडेर विभिन्न समाचारहरु आएका छन । वास्तविकता के हो ? के साच्चै रेखा थापासँग बिहे गर्ने हो ?
हेर्नुहोस, कति मानिसले हाम्रो लभको विषयमा विभिन्न नराम्रा कुराहरु गरे । थुप्रै गसिप बनाए । रेखा थापालाई कसरी बदनाम गराउने भनेर । यो लभ फिल्म चलाउने हल्ला हो सुद्ध भन्न पछि परेनन मान्छेहरु । तर हामी दुवै एक अर्कालाई साँचो, विना स्वार्थ, माया गथ्यौँ, गर्छौ र गरिरहने छौँ । जीवनको अन्तिम पलसम्म पनि । यो मायामा रेखा र सुदर्शन कसैको पनि केही स्वार्थ छैन । तर हाम्रो विवाह चाँही सम्भव छैन । किन कि म विवाहित मान्छे हुँ । हामी माया गर्छौ तर बिवाह गर्ने तरिकाको होइन । असल साथीको हैसियतले हो ।
बाहिर नआएको तर तपाईले थाहा पाएको रेखा थापा कस्ती नायिका हुन ?
कामप्रति बहुत जिम्मेवार मानिस हुन । उनलाई चिने बुझेसम्म अरुको कुरा हुन्छ हुन्छ मात्र भन्छिन तर कामको सुरुवात भने गर्दिनन । पैसा र लोभले रेखा थापालाई लोभ्याउन कसैले पनि सक्दैन । मन प¥यो भने विना पैसा पनि धेरै काम गर्छिन । ५ तारे होटलको भन्दा झुपडीमा बसेर दर्शकसँग कुरा गर्दै खाना खान रुचाउँने नायिका हुन उनी । भगवान र धर्म, कर्मप्रति धेरै रुची भएको मानिस हुन । काठमाडौँ वरपर रेखा थापा नपुगेको मन्दिर, नचिनेको ज्योतिष हात नहेराएको मानिस कमै होलान् । बाहिरबाट देखिने रेखा भित्र देखिने रेखामा धेरै फरक छ । तेसैले मलाई रेखासंग नजिक बनायो र बर्षदिन कतिवेला वित्यो पत्तै भएन। उहाँबाट मैले धेरै कुरा सिक्ने मौका समेत पाएँ ।
२०७१ साललाई फर्केर हेर्दा के पाएँ र के गुमाएँ भन्ने लाग्छ ?
मेरा लागि २०७१ साल नयाँ जन्म भएको वर्ष भने पनि हुन्छ। ७१ मा मैले धेरै पाएँ र धेरै गुमाएँ। पाएको भन्दा गुमाएको धेरै भयो। नाम कमाएँ , थोरै बदनाम पनि भए। २०७० सालमा दुवै हात बिना सगरमाथा आरोहण गरेर संसारलाई अचम्मित बनाएँ । २०७१ मा हिम्मतवाली फिल्म खेलेर नेपाली दर्शकसामु आउँने अवसर पाए या मानिसको दृढ ईच्छा शक्ति भयो भने असम्भव भन्ने कुरा केही छैन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने मौका पाएँ ।
२०७२ सालमा तपाईंको योजना के छ ?
२०७२ सालबाट म नेपाली रजतपटमा पुनः फर्कन्छु । वर्ष मा २ वटा चलचित्र बनाउछु र नेपाली चलचित्रलाई एनआरएन मार्फत अन्तरर्राष्ट्रियकरण गर्न भूमिका खेल्छु। २०७२ मा नै प्रदर्शनमा आउने गरी ‘सुपर हिरो’मा पनि अभिनय गर्दैछु ।
‘सुपर हिरो’ कस्तो प्रकार को चलचित्र हो ? यसको निर्माता तपाईं नै हो ?
सुपर हिरो तपाईं हामी सवैको फिल्म हो । मूल रुपमा भन्नु पर्दा यो विशुद्ध सामाजिक कथा वस्तुमा आधारित नेपाली कथानक चलचित्र हो। एउटा परिवारभित्रको सामान्य कथा हो यो। दुवै हात नभएको मानिसले के–के संघर्ष गरेको छ ? उसले दैनिक जीवनमा भोग्नुपर्ने कठिनाई के–के हुन सक्छन् ? यिनै कथाहरुको सामाजिक , र पारिवारिक समिस्रण नै सुपर हिरो हो। यसको निर्माता साहित्यकार हस्त गौतम र चरित्र अभिनेता पुस्कर भट्ट हुनुहुन्छ। यो चलचित्र हस्त गौतम मृदुल र पुस्कर भट्टको ब्यानरमा निर्माण हुने पहिलो चलचित्र पनि हो ।
हिम्मतवाली फिल्मको रिलिज भएपछि अब फिल्म खेल्दिन भन्नुहुन्थ्यो फेरि किन खेल्न थाल्नु भएको ?
हिम्मतवालीमा चाहेर पनि धेरै कुरा देखाउन सकिन । किनभने त्यो मेरो पहिलो फिल्म थियो । तर पनि त्यसपश्चात मलाई धेरै दर्शक स्रोताले तपाईं चलचित्रमै फर्कनु पर्दछ भन्नुभयो । सुदर्शनको वास्तविक जीवनको कथा , प्रेम र संघर्ष लाइ पनि पर्दामा उतार्नु पर्यो भन्ने आम दर्शकको भावनलाई निरन्तरता दिएको मात्र हो । र पुस्कर भट्टले दर्शकको इच्छा मुताविक कथा तयार पार्नु भएको कारणले पनि म फेरि अभिनयको लागि तयार भएको हुँ।
हिम्मतवालीले व्यवसायिक सफलता समेत पायो, सुपर हिरो त्यस्तै सफल देखिएला त?
म फिल्म लाइनको त्यति ठुलो ज्ञाता होइन तर म कमर्शको विद्यार्थी भएको कारणले चाहिँ व्यापार कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राम्ररी बुझेको छ। एप्पल प्रोडक्टको कहीँकतै बिज्ञापन देखिदैन तर पनि आज आइफोन मान्छेको हातहात मा छ त्यो कारण नयाँ सोच को हो हिम्मतवाली चल्नुको कारण पनि त्यही नयाँ प्रयोग थियो। त्यसैले नयाँ सोच र प्रयोग गरी नेपाली समाजमा भित्रकै कथा समााजकै लागि तयार पार्ने हो भने पक्कै दर्शकहरुले मन पराउनु हुनेछ। ठुला कलाकार र ब्यानर मा बनेका फिल्म हिट हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन , नयाँ निर्देशक, कलाकार र ब्यानरमा बनेका फिल्म पनि सुपर डुपर हिट भएका उदाहरण हामीसँग प्रशस्तै छन्। तेसैले म यो प्रोजेक्टप्रति निकै आशावादी छु। फेरि हिटै हुन्छ भनेर यो फिल्म मैले खेल्न लागेको पनि होइन । सुपर हिरोको कथाले मान्छेको सोचै परिवर्तन गर्न सक्छ । मानिसमा नयाँ जोश , जिम्मेवारी नयाँ ढंगले बाँच्ने हौसला प्रदान गर्न सक्छ । सुपर हिरो हिम्मतभन्दा पृथक हुनेछ ।
तपाईंको महत्वपूर्ण पाटो जो अहिलेसम्म बाहिर आएको छ्रैन ?
समयको धार र आत्मविसश्वासको सारलार्इ समिस्रण गर्दै अलग क्षमताको पहिचान बनाउने मानिसहरु मध्ये पर्दछु म। सधैँ नयाँ परिचय बनाउने र इतिहास कोर्न ठुलो सपना बोकेको सरल र सवैसँग सहजै घुलमिल हुन सक्ने साधारण मानिस हुँ म ।
अन्त्यमा आम दर्शक स्रोतालाई के भन्न चाँहनुहुन्छ ?
जीवनमा सानातिना अवरोध आइनै रहन्छन्। आरोह–अवरोह पनि आउँछन् । हिम्मत नहार्नुस्, संघर्ष गर्ने मानिस नै सफल हुन्छन। विरासतमा पाएको कुराले मान्छेलार्इ स्वाभिमानी बनाउदैँन। पालुवा नपलाए सम्म बसन्तको अनुभुति हुँदैन । आफ्नो क्षमता आफैँ देखाउनु पर्दछ । अरुको भर परेर बस्दा सफल बनिँदैन। अरुको घरमा बलेको आगोमा आफ्नो रोटी सेकाउन मिल्दैन । त्यसले भोकपनि मेटाउँदैन । नयाँवर्ष –२०७२ सालको हार्दिक मंगलमय शुभकामना !
« Reply #184 on: April 20, 2015, 03:53:31 PM »
चेपाङ केन्द्रका बच्चालाई रेखाकाे सहयाेग
चितवन, वैशाख ७ - अभिनेत्री रेखा थापा आएकी त थिइन् एउटा सहकारी संस्थाको उद्घाटन गर्न, तर आइतबारको चितवन बसाइमा उनले चेपाङ समुदायका बालबालिका र ठूलाबडाका लागि पनि समय निकालिन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) कतारका सल्लाहकार आरके शर्मासँग उनी रत्ननगर १० स्थित मंगलपुरमा रहेको गामबेंसीको चेपाङ संरक्षण केन्द्रमा थिइन्, दिउँसो उनी । 'वान पिस' मा रहेकी अभिनेत्री घेरिन बेर लागेन ।
'चेपाङ समुदायका बारेमा पत्रपत्रिकामा धेरै पढेकी थिएँ,' उनले भनिन्, 'पहिलो पटक प्रत्यक्ष देख्न पाउँदा खुसी लाग्यो । चेपाङ बालबालिकालाई मेरो क्षेत्रबाट हुन सक्ने सहयोग गर्छु ।'
आफूसँग फोटो खिच्न ठेलमठेल गरिरहेको भीडमा उनले आफ्नो योजना सुनाइन्, 'पढ्नलेख्न नपाएका, अनाथ बालबालिका कुनै महिलाले आफूसँग राखेर पढाउँदा टीकाटिप्पणी गर्ने धेरै हुँदा रहेछन् । मैले अबदेखि बच्चा पाल्नेभन्दा उनीहरूको घरगाउँमै पुगेर शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहयोग गर्ने सोच बनाएकी छु ।'
उनले रेखा थापा फाउन्डेसनको संरक्षणमा रहने गरी ल्याएका चार जना राउटे बालबालिकालाई सम्बन्धित अभिभावकको जिम्मा लगाइसकेको बताइन् । 'सामाजिक काम गर्न पाउँदा मन रमाउँछ,'
उनले थपिन् ।
वर्ष दिनपछि चितवन आएकी रेखाले खाजा र झोलाहरू केन्द्रका बालबालिकामाझ वितरण गरिन् । शर्माले २१ क्विन्टल चामल र रेखाले दुई सय लिटर तेल सहयोगको प्रतिबद्धता पनि जनाए ।
रेखा यतिबेला टेम्पोचालक महिलाको कथालाई समेटेर फिल्म निर्माणको तयारीमा जुटेकी छन् । उनका अनुसार 'राम प्यारी' को सुटिङ जेठ ११ देखि सुरु हुनेछ ।
« Reply #185 on: April 21, 2015, 08:57:25 AM »
‘दुईवर्षपछि विवाह गर्छु, एउटा छोरा र एउटा छोरी पाउँछु’
नेपाली फिल्म क्षेत्रमा नायिकाको नाम लिँदा अग्रस्थानमा आउने नाम हो, रेखा थापा । फिल्म ‘हिरो’बाट नायिकाका रूपमा डेब्यु गरेकी उनले पछिल्लो फिल्म ‘तथास्तु’सम्म आइपुग्दा उनले दर्जनौँ फिल्ममा अभिनय गरिसकेकी छन् । कति फिल्ममा काम गरिन् भन्ने उनलाई सम्झना पनि छैन । ग्ल्यामरदेखि एक्सनपूर्ण भूमिकामा उनको अभिनय निकै जम्ने गर्छ । त्यसैकारणले उनी अभिनित अधिकांश फिल्मले सफलताको स्वाद चाख्ने गरेका छन् । फिल्म ‘हिरो’मा अभिनय गरेको केही समयपछि त्यही फिल्मका निर्माता छविराज ओझासँग विवाह गरेकी रेखाले उनीसँगको करिब १२ वर्षको वैवाहिक जीवन केही वर्षअघि टुंग्याइन् । विशेषत प्रेम र सेक्ससम्बन्धी कुराकानी भइरहँदा छविराजको नाम आएपछि उनले आफुले छविराजसँग जोडिएको कुनै पनि कुरा नगर्ने अडान लिइन् । ‘चार-पाँच वर्षदेखि मलाई यही विषयमा प्रश्न आइरहन्छ, अन्य मानिसको पनि त तपाईं कुरा गर्न सक्नुहुन्छ नि, किन खालि एउटै मात्र नाम लिइरहनु हुन्छ ?’ उनको भनाइ थियो । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप ः–
प्रेमको परिभाषा आफैमा गहन छ । जसले प्रेम गर्छ उसले नै प्रेमको भाषा जानेको हुँदैन । वास्तवमा प्रेम सस्तो देखिने तत्व होइन, यो महसुस गर्ने कुरा हो । गुलियो खाँदा त्यसबाट प्राप्त हुने अथवा महसुस हुने गुलियोपना हुन्छ नि, प्रेम पनि त्यस्तै हो ।
प्रेम किन आवश्यक छ ?
मानव शरीरमा श्वासप्रश्वासको जति महत्व छ, प्रेमको महत्व पनि त्यति नै छ । यो एउटा चुम्बकीय शक्ति हो । प्रेमकै कारण पृथ्वी अडिएको छ । प्रेमविना मान्छे बाँच्न सक्दैन ।
तपाईंको पहिलो प्रेम कुन उमेरमा भयो ?
मेरो पहिलो प्रेम म जन्मिएदेखि नै भयो । त्यो बेला मैले आमाको स्तनपान लिँदा खेरी नै आमासँग प्रेम गरेको थिएँ, त्यसपछि बाबासँग अनि परिवारसँग पनि प्रेम भयो ।
अनि आकर्षक पुरुषसँग नि ?
एकजना व्यक्तिसँग निकै सिरियस किसिमको प्रेम भयो । तर, पछि बुझ्दै जाँदा माया भनेको प्राप्तिका लागि होइन रहेछ । प्रेम गरेपछि त्यो मानिस मेरै हुनुपर्छ भन्ने कुरा भ्रम रहेछ । यो त केबल बगिरहने खोला जस्तै हुँदोरहेछ ।
दिगो प्रेम राख्न महिला र पुरुषमध्ये को अग्रपंक्तिमा हुँदो रहेछ ?
मलाई लाग्छ, साँचो प्रेमको कुनै पनि सीमाना हुँदैन । तर, दिगो प्रेममा चाहिँ महिलाहरू नै अगाडि हुन्छन् । किनकि, उनीहरु संयम हुन्छन्, शान्त हुन्छन् । महिलालाई प्रेमका हरेक चिज प्रिय लाग्छ । त्यसकारण पनि प्रेमको मामलामा उनीहरू गम्भीर हुन्छन् ।
त्यसो भए पुरुष फ्रड हुन्छन् त ?
अहिलेको माहौल हेर्दा महिला पुरुष दुवै बराबर हुन् कि जस्तो लाग्छ । उनीहरू दुवै आपूmलाई कमी हुन दिँदैनन् । तर, हेल्दी किसिमको प्रेम गरेको चाहिँ मैले कमै पाएको छु ।
प्रेम र सेक्सको सम्बन्ध कस्तो हो ?
प्रेम यस्तो शब्द हो, जसले मानिसलाई आफैमा आनन्द दिन्छ । राम्रो र चोखो प्रेम गर्ने जोडीको दिमागमा सेक्स शब्द आउँछ जस्तो लाग्दैन ।
प्रेमका लागि सेक्स अनिवार्य हो कि सेक्सका लागि प्रेम ?
अहिलेको आधुनिक समयलाई हेर्दा अहिले प्रेममा स्वार्थीपना पाउँछु । प्रेमका लागि सेक्स र सेक्सका लागि प्रेम दुवै देख्छु । तर, साँचो प्रेम एउटा निचोडको हद पार गरेसम्म सामान्य हुनुपर्छ ।
तपाईंको जीवनमा प्रेम र सेक्सको महत्व कस्तो रह्यो ?
जीवनमा म यी दुई कुराबाट टाढा नै रहेँ । अहिलेको कुरा गर्दा पनि म कसैको प्रेममा परेँ भन्दा कसैले पत्याउँदैनन् र पत्याउने वातावरण पनि छैन । सबैजना हावादारी कुरा भन्दै उडाउँछन् । (हाँसो)
तपाईंको सानै उमेरमा विवाह भयो । त्यो प्रेमको आकर्षण थियो या सम्बन्धको थियो ?
वास्तवमा त्यो केही थिएन । त्यो बेला मेरो ‘किस्मत’ या ‘लक’ नै त्यस्तो थियो होला । परिवारमाझ रहेर म हुर्के बढे पनि फिल्मी करियरमा मलाई गार्जेनको आवश्यकता थियो । किनकि, त्यो बेला फिल्म क्षेत्रमा आउँदा म एक्ली थिएँ । मलाई अभिभावकको खाँचो थियो ।
अहिले सम्झँदा त्यो निर्णय सही लाग्छ ?
मैले गरेको हरेक निर्णय मलाई सही लाग्छ । किनकि, हरेक मान्छे आफ्नो कर्म लिएर आएको हुन्छ, मेरो पनि त्यही हो । मलाई कहिल्यै पनि आफ्नो काममा पश्चात्ताप लागेन किनकी जुन मान्छेको कर्ममा राम्रो नराम्रो लेखिएको हुन्छ, उसको भोगाइ पनि त्यस्तै हुन्छ ।
तपाईंलाई महिला र पुरुषको कुन कुराले आकर्षण गर्छ ?
मलाई दुवै वर्गको फिट एन्ड फाइन किसिमको बडी, पुष्ट शरीर राम्रो लाग्छ । जसले लगाएको पहिरन सुहाउँदिलो होस् ।
दर्शकहरू आर्यन सिग्देल र रेखा थापाको जोडी फेरि एकपटक पर्दामा हेर्न चाहन्छन् नि ?
आर्यन भनेको रेखाबाटै जन्मिएको सन्तान हो् अर्थात मेरै व्यानरबाट जन्मिएको सन्तान । मैले अरू पनि नयाँ सन्तान जन्माउनु पर्ने हुन्छ । फेरि म जुन पायो त्यही कथामा फिल्म पनि खेल्दिनँ । मानवीय जनजीवनका विषय, सामाजिक विषयवस्तु र अझ बढी सन्देशमूलक किसिमका फिल्म खेल्न रुचाउँछु । दर्शकको त्यो चाहना हुनु स्वाभाविक हो । वास्तविक रूपमा भन्नुपर्दा न मैले उसको केही बिगारेको छु, न उसले मेरो केही नै बिगारेको छ ।
नारीप्रधान फिल्ममा बढी देखिनुहुन्छ, प्रेमकथाका फिल्ममा काम नगर्ने हो ?
कुरा त्यस्तो होइन । मैले खेलेका प्रायः फिल्ममा प्रेमका कथा नै हुन्छन् । तर, तपाईंले भन्नुभएको जस्तो पूर्ण प्रेमकथाको फिल्मचाहिँ अब कात्तिकतिर नयाँ कलाकार लिएर म आफैमा डिरेक्सन गर्दैछु । त्यसपछि आफ्नै ब्यानरमा अर्को प्रेम कथाकै फिल्म बन्नेछ, जसमा म आफैले अभिनय गर्नेछु ।
पुनः विवाह गर्ने योजना पनि होला नि ?
मान्छेमा हरेक बस्तुको उपभोग गर्ने चाहना हुन्छ । मलाई पनि विवाहको विषयमा घर परिवारबाट निरन्तर रूपमा दबाब आइरहेको छ । ‘तिमी विवाह गर्न चाहन्छौ भने हामी केटा खोजिदिन्छौँ’ भनिरहनु भएको छ । तर, म अहिले काममा व्यस्त भएकाले त्यतातिर सोचेकी छैन ।
आफ्नै क्षेत्रको व्यक्तिसँग विवाह गर्ने हो ?
म मेरो क्षेत्रलाई आफ्नो माइती ठान्छु । त्यसकारण माइतीको मान्छेसँग विवाह पनि गर्नुहुँदैन क्यार (हाँसो) । म अरू जस्तो केटा खोज्दै कतै जान्नँ, मलाई खोज्न केटा आफैमा आउनुपर्छ ।
भनेपछि कहिलेसम्म विवाह होला त ?
भर्खरै ०७२ साल सुरु भएको छ । मेरो चाहना ०७४ सालसम्म विवाह गर्ने योजना हो । यदि, त्यो बेलासम्म पनि विवाह भएन भने म देशसँग विवाह गर्छु । किनकि, मेरो विवाह गर्ने उमेर अझै पनि बितेको छैन । (पुनः हाँसो)
अनि छोराछोरीको चाहना नि ?
मान्छेसँग विवाह गरेँ भने एउटा छोरा र छोरी जन्माउँछु । तर, देशसँग विवाह गरेँ भने सबै जनता आफ्ना छोराछोरी हुनेछन् ।
तपाईंको नयाँ प्रोजेक्ट ‘रामप्यारी’को बारेमा केही बताइदिनुहुन्छ कि ?
‘रामप्यारी’ ट्याम्पो ड्राइभरको कथा हो । मेरो फिल्मले राष्ट्रियताको कुरा गर्नेछ । स्वदेशमा काम गर्न लजाउँने अनि विदेशमा गएर चाहिँ जस्तो पनि काम गर्नेहरू प्रति स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण छ भन्ने किसिमको सन्देश दिनेछ । यहाँ ट्याम्पो चलाएर महिनाको १५ देखि २० हजार पनि कमाउन सक्ने महिलाहरू छन् । स्वदेशमै काम गर्न सके कमाइ पनि राम्रो हुन्छ भन्ने सन्देश दिनेछु । फिल्म पूर्ण रूपमा महिलावादी हुनेछ ।
( पत्रकार नेमिष गौतमले गरेको यो कुराकानी शनिबारको सौर्य दैनिकबाट )
« Reply #186 on: June 11, 2015, 04:31:28 AM »
« Reply #187 on: July 01, 2015, 02:34:16 AM »
रेखा थापाले मलाई ‘आइ लभ यु’ भन्छिन् : राजेश पायल
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आषाढ १५, २०७२
काठमाडौं : गायक राजेश पायल राईले अभिनेत्री रेखा थापाले आफूलाई ‘आइ लभ यु’ भन्ने गरेको बताएका छन् । तर, आफुहरुको माया विवाह गर्ने खालको नभएको उनको भनाई छ । नयाँ पत्रिका दैनिकलाई अन्तरवार्ता दिदै गायक राईले रेखालाई साडी लगाउन सुझाब समेत दिएका छन् । गायक राईले रेखासँगको सम्बन्ध, उनीसँग हुने कुराकानीबारे यसरी बताएका छन् :-
राजेश र रेखा
मैले रेखा (थापा)लाई पहिलोपटक भेटेको सन् ००५ वा ००७ मा हो । नेपालमा होइन, एकैचोटि मलेसियामा भेटेको । एउटा कार्यक्रममा गएका वेला भेट भयो । त्यसवेला रेखा अहिलेकी रेखा थिइनन्, भर्खरै तीन–चारवटा फिल्म खेलेकी कलाकार थिइन् । पूर्वबाट उदाउँदै गरेकी एउटी नायिकाका रूपमा त्यहाँ चिनेँ । एकदमै फ्लेक्जिबल थिइन्, बोलिरहने खालकी ।
फेसन डिजाइनरले कहिलेकाहीँ झन्डा, देश देख्दैन । कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय झन्डाले गुप्तांग छोपेको कपडा डिजाइन हुन्छ । रेखाले पनि त्यसलाई फेसनको रूपमा मात्रै लिएकी थिइन् । यति धेरै विवादमा आउला भन्ने ठानेकी थिइनन् होला ।
उनका हरेक कुरा चलचित्र ‘फोकस’ थिए । त्यसप्रति डेडिकेसन थियो । महाभारतमा अर्जुनले धनुषबाण हान्दा रूखको हाँगामा चरा मात्र देख्थे रे । त्यस्तै, रेखाले चलचित्रलाई ‘अर्जुनले चरा देखेजसरी’ देखिकी थिइन् । रेखाको सुन्दरता र चलचित्रप्रतिको लगाबले मलाई त्यतिवेलै लागेको थियो, ‘यो केटीले पक्कै केही गर्न सक्छे ।’
त्यसपछिका दिनमा हाम्रो मित्रता बढ्यो । हामीले यति धेरै कन्सर्ट गर्‍यौँ कि भोजपुरमा त होलिकोप्टरमै गएर सो गर्‍यौँ । कतार, ओमानलगायतका देशमा गएर सो गर्‍यौँ । धेरै कन्सर्टमा उनले मसँगै गीत पनि गाइन् । उनी गायिका त होइनन्, नायिका नै हुन्, तैपनि इन्टरटेनरचाहिँ हुन् । कुनै न कुनै रूपमा इन्टरटेन्मेन्ट गर्छिन् र गराउँछिन् । उनीसँगको संगतका रमाइला प्रसंग छन् ।
एकपटक कार्यक्रम लिएर कतार पुगेका थियौँ । हलभित्रै छिरेर कतारी प्रहरीले कार्यक्रम रोक्नुस् भन्यो । हामीले किन रोक्ने ? भन्यौँ । रेखाको पहिरन छोटो भएकोले रोक्नुस् भनेको रहेछ । रोक्नुस् मात्रै भनेनन्, केही एकछिन त केरकार नै गरे । हामीले ‘हाम्रो नायिका हो, हाम्रो देशमा यो गीतमा यत्तिको छोटो कपडा लगाएर नाच्दा सामान्य मानिन्छ’ भन्यौँ । उनीहरूले ‘हाम्रो कतारी नियम छ । हाम्रो नियममा यति छोटो लुगा लगाएर नाच्न पाइँदैन’ भने । ‘यी नायिका भए पनि हाम्रो देशको ‘रुल्स’ बुझ्नुपर्दैन’ भनेर हामीलाई झनै थर्काए । हामीले माफी माग्यौँ ।
मैले रेखालाई ‘पाइन्ट लगाउनुस्’ भनेँ । उनले ‘अरू लुगा त होटेलमा पो छ’ भनिन् । हामी ‘पर्फम’ गर्न गएका । उनले ‘पर्फम’ नै गर्न नपाउनेजस्तो अवस्था आयो । हामीले प्रहरीलाई हाम्रो बाध्यता सुनाएर फेरि आग्रह गर्‍यौँ । उनीहरूले ‘एकपटकलाई ठीक छ । तर, अल्लाहको प्रार्थना सकिएपछि मात्रै गर्नू’ भने । १५ मिनेटपछि उनीहरूले अल्लाहको प्रार्थना सके । त्यसपछि बल्ल रेखाले त्यही पोसाकमै मसँग ‘सागरसरि चोखो माया’ गीत गाइन् ।
रेखा मेरी धेरै राम्री फ्यान हुन् । मलेसियामा उनले मलाई ‘दाइ’ भनेर बोलाएकी थिइन् । म काम, उमेर दुवैले सिनियर थिएँ । हामी एकले अर्कालाई ‘डार्लिङ’ भनेर बोलाउँछौँ । म उनलाई तिमी भन्छु, उनी तपाईं भन्छिन् । उनको स्वभाव हक्की छ । पूर्वमा हुर्किएकी, क्षत्रीकी छोरी भएर पनि होला, राई–लिम्बूको जस्तो हक्की स्वभाव छ । तुरुन्तै निर्णय लिइहाल्ने बानी छ । त्यही तुरुन्तै निर्णय लिइहाल्ने बानीले उनलाई रेखा थापा पनि बनाएको हो । कहिलेकाहीँ भने उनको यही स्वभावले अप्ठ्यारो पनि पारेको छ । तथापि, मलाई उनको स्वभाव मनपर्छ ।
मोबाइलमा एसएमएस भइरहन्छ । लोकगीतमा जुहारी खेल्छौँ । कहिलेकाहीँ उनी हिन्दी गीत पठाइरहेकी हुन्छिन् । मैले पनि त्यसलाई काउन्टर गर्ने गरी अरू गीत पठाउँछु । ती सबै रमाइलोका लागि हो ।
एकपटक म बिरामी परेर हातखुट्टा नचल्ने अवस्थाको थिएँ । त्यस्तो वेलामा पनि रेखाले हिफाजत फिल्ममा गीत गाउन आग्रह गरिन् । संगीतकार महेश खड्का र रेखाले मेरो निबासमै आएर गीत गाउन आग्रह गरे ।
रेखाले मलाई डोर्‍याएर रेकर्डिङ स्टुडियोसम्म पुर्‍याइन् । त्यही फिल्ममा राखिएको त्यत्ति राम्रो गीत पछि विवादास्पद पनि बन्यो । हरे, हरे नारायण, नारायण भन्ने गीतको बोल थियो । रेखा र म एउटा प्रोग्राममा कतारमा थियौँ । यहाँ त्यसको मुद्दा चल्दै थियो । रेखा थापालाई हिन्दू संघले मुद्दा हालेको थियो, ‘गीत सेन्सर गराइयोस्’ भनेर । त्यो गीतमा रेखाले हरे, हरे नारायण लगाएको कपडा तल लगाएकी थिइन् । पछि त्यो विवाद मिलायौँ ।
फेसन डिजाइनरले कहिलेकाहीँ झन्डा, देश देख्दैन । कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय झन्डाले गुप्तांग छोपेको कपडा डिजाइन हुन्छ । रेखाले पनि त्यसलाई फेसनको रूपमा मात्रै लिएकी थिइन् । यति धेरै विवादमा आउला भन्ने ठानेकी थिइनन् होला । कहिलेकाहीँ म उनलाई ‘तिम्रो बालहठी स्वभाव’की पनि भन्छु । मेरी प्यारी नायिका भएकीले त्यसो भन्छु । रेखा थापाका ९० प्रतिशत फिल्मका गीत मैले गाएको छु ।
रेखासँग घुम्नकै लागि कतै निस्किएको छैन । विदेशतिर कार्यक्रममा जाँदा घुमिन्छ । नेपालमा कहिलेकाहीँ क्लबहरूमा भेट हुन्छ । कहिलेकाहीँ कुनै कुराकानी गर्नुपर्ने भएमा ‘लौ त्यो ठाउँ सेक्रेट छ, त्यहाँ गएर कुरा गरौँ । खाजा खाऔँ’ भन्छौँ । मोबाइलमा एसएमएस भइरहन्छ । लोकगीतमा जुहारी खेल्छौँ । कहिलेकाहीँ उनी हिन्दी गीत पठाइरहेकी हुन्छिन् । मैले पनि त्यसलाई काउन्टर गर्ने गरी अरू गीत पठाउँछु । ती सबै रमाइलोका लागि हो ।
रेखा थापा भेट्दा ‘तपाईं विवाह गर्नुस् । राईनी बिहे गर्नुस् । हङकङ, युके बस्नेहरू निकै राम्रा हुन्छन् । चट्ट लाएर विवाह गर्नुस्’ भन्छिन् । उनी मात्रै हुन्, मलाई विवाह गर्नुस् भन्ने । अरू मान्छेले मलाई विवाह गर्नुस् दाइ भनेको सुनेको छैन । उनी कहिलेकाहीँ वैवाहिक जीवनबारे कुरा गर्छिन् । ‘सानै उमेरमा थाहा नै नपाई विवाह गरियो’ भन्छिन् । ‘निकै सोचेर गर्नुपर्ने चिज रहेछ’ भन्छिन् ।
उनको सम्बन्धविच्छेद पनि भयो । उनको कुरा सुन्दा जेनेरेसन ग्यापकै कारण उनको सम्बन्धविच्छेद भएको भन्न सकिन्छ । उनले ‘माया गथ्र्यो, त्यो स्वाभाविक हो, तर पनि कुनै चिजमा असमझदारी हुन्थ्यो, मेरो त कुनै गल्ती छैन’ भन्छिन् । मैले छवि दाइलाई पनि ‘किन हो, सम्बन्धविच्छेद भएको’ भनेर सोधेको पनि छैन । म अर्काको व्यक्तिगत मामिला सोध्न पनि चाहन्नँ ।
रेखा थापा छोटा कपडा लगाउँछिन्, मन परेरै होला । म उनलाई ‘तिमी चलेकी राम्री नायिका हौ, कुर्था, साडी लगाउन’ भन्छु । उनी अहिले बिस्तारै लगाउँदै छिन् पनि । फिल्ममा छोटा कपडा लगाउँछिन्, त्यो त कथाले होला ।हामी एकले अर्कालाई माया गर्छौ। श्रद्धा गर्छौ। उनी ‘आइ लभ यु’ पनि भन्छिन् । तर, यो प्रेमिकाले प्रेमीलाई भन्ने आई लभ यु होइन । हामीले एकले अर्कालाई गर्ने मायाको निक्र्यौल त्यो होइन कि, विवाह गर्ने । एकले अर्कालाई सम्मान गर्छौँ । कलाकारिताको न्यानो सम्बन्धबाहेक केही छैन ।
रेखालाई मेरो अरू कुनै सुझाब छैन । उनी सर्वाधिक हेरिएकी नायिका हुन् । अभिनयकी खानी हुन् । डाइरेक्टरले उनको अभिनयकला अझै बाहिर ल्याउन सक्छन् । धेरै मानिस उनीबारे चासो राख्छन् । उनी फेरि राजनीतिमा पनि लाग्दै छिन् । मेरो एउटै सल्लाह छ, निर्णय गर्दा हतार नगर । विचार पुर्‍याऊ, किनकि अहिलेको परिवेशमा नेपालकी नम्बर वान नायिका रेखा थापा नै हुन् ।
« Reply #188 on: July 02, 2015, 10:00:31 PM »
Rekha Thapa with Jiwan Luitel
जब जब माया बस्छ
« Reply #189 on: July 09, 2015, 01:08:49 AM »
अमेरिकाबाट अभिनेत्री रेखाको निर्देशनमा गायक राजेशपायलले गीत गाए
more -- http://xnepali.net/movies/rekha-thapa-remotely-directed-rajesh-payal-rai-song-from-usa/
काठमाडौं । अभिनेत्री रेखा थापाले आफ्नो परिचय थप फराकिलो बनाएकी छिन् । गत वर्षहिम्मतवाली निर्देशन गरेर आफुलाई निर्देशकको रुपमा बलियो सावित गरेकी रेखा अब संगीतकार पनि बनेकी छिन् । रेखाले आगामी भदौंमा छायांकन गरिने आफ्नो नयाँ चलचित्र रामप्यारीमा समावेश एक गीतमा संगीत दिएकी हुन् । ‘अर्को जुनी कुन्नि भेट हुन की नहुने, यही जुनीमा माया गरुनी’ बोलमा गीत रेखाले आफ्नो संगीतमा मंगलबार राजधानीको म्युजिसियन स्टुडियोमा रेकर्ड गराएकी हुन् । केही समययता अमेरिका रहेकी अभिनेत्री रेखा थापाले भाइबरको सहयोगमा गायक राजेशपायललाई निर्देशन दिएकी थिईन् । गीतकार किरण खरेलको शब्द रहेको यस गीतमा गायक राजेशसँगै गायिका मनिष पोख्ररेलले पनि आवाज दिएकी छिन् । ‘संगीतकारको उपस्थिती बिनानै गीतमा आवाज दिन पाउँदा छ्ट्टै अनुभव भएको भयो’, गायक राजेशले खुशी हुँदै भने, ‘रेखा बहुप्रतिभाशाली कलाकार हुन् । अभिनयमा मात्र हैन् रेखाको संगीतमा पनि जादु भेटियो ।’